Olee otú idetuo OS ọhụrụ diski ike
Olee otú Detuo OS ka A New Draịvụ
> Resource> Nyefee> Olee otú iji Detuo OS ka A New Draịvụ
Enwere m ike iṅomi m sistemụ arụmọrụ na faịlụ site na otu ike mbanye ọzọ ike mbanye? M chọrọ ehichapụkwa ndị ọzọ siri ike mbanye ọcha.
N'ezie ị nwere ike. Ma, ihe i kwesịrị ntị bụ na ị pụrụ bụghị nanị idetuo na mado gị sistemụ site na iji Ctrl + C na Ctrl + V, n'ihi na nke a nanị mbipụta faịlụ na ị pụrụ ịhụ, ma e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-adịghị ahụ anya faịlụ, isi components nke gị usoro dị ka buut faịlụ, a na-apụghị depụtaghachiri n'uzọ. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ iṅomi OS ọhụrụ ike mbanye na chọrọ ya-arụ ọrụ kwesịrị, ị ga-mmepụta oyiri ma ọ bụ oyiyi ya. Naanị cloning na Onyonyo nwere ike inyere idetuo zuru sistemụ.
Olee otú Detuo OS n'ụzọ zuru ezu ka a ọhụrụ ike mbanye?
Mmepụta oyiri ma ọ bụ oyiyi zuru sistemụ, i kwesịrị iji a ọzọ omume na-akwado cloning ma ọ bụ Onyonyo gị Windows. I nwere ike ịgbalị Wondershare LiveBoot buut CD, na nke ị nwere ike mmepụta oyiri gị os ma ọ bụ oyiyi gị os. Na bootable CD / USB ọ na-enye na-enye gị a dị ọcha na gburugburu ebe obibi enweghị ihe ọ bụla ọrịa ma ọ bụ mmebi. Ị pụrụ iṅomi a dị ọcha sistemụ maka ọhụrụ gị ike mbanye.
Cloning OS ga enyere gị aka ime a OS oyiri kpọmkwem dị ka gị mbụ otu, mgbe Onyonyo OS ga-enyere idetuo gị os dị ka ihe oyiyi faịlụ. Ha abụọ bụ ndị zuru OS ọdịnaya.
Get LiveBoot CD / USB ebe a
Step1. Buut gị na kọmputa site LiveBoot
Fanye CD ma ọ bụ nkwụnye na USB gị na kọmputa na-amalite ya. Họrọ ka buut si LiveBoot. Nke a LiveBoot integrates na ọhụrụ Microsoft Pee 3.0 technology, na ọ bụ dakọtara na niile ụdị nke kọmputa. Ọbụna mgbe gị na kọmputa na-apụghị booted elu, ị nwekwara ike iji nke a LiveBoot buut gị na kọmputa na idetuo gị sistemụ.
Step2. Amalite idetuo gị os
Mgbe na n'ime Windows, na LiveBoot ga-oru-akpaghị aka. Mgbe ahụ na-aga "Disk Management", na ị pụrụ iṅomi gị os ebe a ugbu a
Ị nwere ike ịhọrọ mmepụta oyiri dum disk, ma ọ bụ naanị nkebi ebe gị sistemụ dị adị. Ọdịnaya gị mmepụta oyiri ga na-mbụ ụzọ. Ma ọ bụ i nwere ike họrọ "Disk ndabere" ma ọ bụ "nkebi ndabere" ka oyiyi gị sistemụ ọzọ disk.
Step3. Detuo OS ọhụrụ gị ike mbanye
Mgbe cloning ma ọ bụ Onyonyo gị os, ị pụrụ iṅomi ya na gị na ọhụrụ ike mbanye ugbu a. Ọ bụrụ na ị họọrọ mmepụta oyiri, ị nwere ike mmepụta oyiri ya na gị na ọhụrụ mbanye dị nnọọ ka ihe ndị i ejikwara n'elu. Ọ bụrụ na ị imaged ya, ị nwere ike iweghachi ya ọhụrụ gị ike mbanye. Ma nke ahụ bụ mere.
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-echeghị na arụmọrụ gị arụ ọrụ nke ọma, ị nwere ike họrọ reinstall ya na gị na ọhụrụ ike mbanye. Ma na nke a LiveBoot nwere ike inyere ịchọta gị Windows ID na igodo. Ị na-adịghị mkpa na-eji ọ bụla mmezi dollar na ịzụta a Windows.
NTLDR Na-adịghị - 2 Mfe Ụzọ idozi ya